Guddoonka barlamanka oo xal ka gaaray soo jeedin ka dhan aheyd shirka Jowhar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 24 April 2016
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee golla shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo shir guddoominayey kulanka maanta barlamankaa ayaa golaha ka hor akhriyey qobada lagu dhameeyey moshinkaasi.
Barlamanka Soomaaliya kulanka maanta waxa warbxiinku aadan akhrinta labaad ee sharciga ladagaalanka argagixisada waxa ay ka dhagaysteen guddiga amniga golaha .
Xildhibaan Dahir Amiun Jeesow guddoomiye ku xigeenka guddiga amniga baarlamanka ayaa Xildhibanadda u soo jeediyey lix qobad oo ka mid ah sharciga ladagaallanka argagixisada in wax ka badal lagu sameeyo.
Mudane Maxamed Cabdalla Cawad guddomiye ku xigeenka baarlamanaka ayaa tilmaamay in wada tashaiyada lagu samaynayo sharciga ladagallanka argagixisada lagu soo dhamaystiro mudo bil ah, guddiga iyo Xukumaduna ay iska kashadaan.
Wasiir ku xigeenka Wasaradda Amniga Qaranka ee Xukumadda Soomaaliya Cabdinasir Maxamed Cali ayaa sidoo kale maanta baarlamanka u soo gudbiyey shrciga ka hortaga waxyabaha qarxa.